एफिलियट मार्केटिंग प्रोग्राम - जिंहुआ एक्बमेकर टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
सम्बद्ध मार्केटिंग कार्यक्रम
Ecubmaker सम्बद्ध मार्केटिंग कार्यक्रम
हामी सहयोगको हरेक सम्भावनाको कदर गर्दछौं
यदि तपाईंसँग एक सोशल मीडिया खाता छ
धेरै अनुयायीहरूको साथबाट:
यदि तपाईं यी परिचयहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ भनेः
From वेबसाइटबाट एक सम्पादक
Forum फोरमबाट एक प्रशासक वा मोडरेटर
Blog एक ब्लगर
Marketing मार्केटिंग कम्पनीबाट एक डुँड
प्रत्येक सफल रेफरलको लागि%% कमिसन कमाउनुहोस्
सफल रेफरलहरूमा कमिसनहरूमा%% सम्म पाउनुहोस्। सबै क्वालिफाइंग खरीदहरूबाट कमिशनहरू कमाउनुहोस्, तपाईले विज्ञापन गर्नु भएको उत्पादनहरू मात्र होईन। साथै, हाम्रो प्रतिस्पर्धी रूपान्तरण दरहरूले तपाईंलाई तपाईंको आय अधिकतम गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाइँसँग केहि प्रश्न छ भने, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:बाजार05@zd3dp.com .
यदि तपाईं १००k भन्दा बढी युट्युब फ्यानहरूको साथ युट्यूब समीक्षक हुनुहुन्छ भने
हामी तपाईंलाई परीक्षणको लागि निःशुल्क नमूना प्रदान गर्न इच्छुक छौं। तपाईं आफ्नै विचारहरू र प्रोजेक्टहरूसँग मूल्या can्कन गर्न सक्नुहुनेछ त्यसपछि यसलाई अनलाइन प्रकाशित गर्नुहोस्। उत्पादन प्राप्त गर्न, कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्:बाजार05@zd3dp.com .
ईक्युमेकर सम्बद्ध मार्केटिंग प्रोग्रामबाट सुरू गरौं
सम्बद्ध कार्यक्रमले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू, प्रकाशकहरू र ब्लगरहरूलाई उनीहरूको ट्राफिक मोनेटाइज गर्न मद्दत गर्दछ। त्यसोभए तपाईं सजिलै लिंक-निर्माण उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको दर्शकहरूलाई तपाईंको सिफारिशहरूको लागि निर्देशन दिन, र योग्य खरीदहरू र कार्यक्रमहरूबाट कमाउन।
सिर्जनाकर्ताहरू, प्रकाशकहरू र ब्लग- मा सामेल हुनुहोस्
ईयूकुसँग कमाई गरिरहेका गेर्स
निर्माता सम्बद्ध कार्यक्रम।
तपाईंको दर्शकहरूको साथ उत्पादनहरू साझेदारी गर्नुहोस्।
हामीले अनुकूलित उत्पादन मैटर-
तपाईंको लागि als।
सहयोगी कम- मा%% सम्म कमाउनुहोस्
योग्य खरीदबाट मिशनहरू
हामीसँग सामेल हुन यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
गाइड रेजिस्टर गर्नुहोस्